Linux Foundation Course – BurmeseHearts
SKU: linux-foundation-course Categories: Network and Security, Offline Courses Tags: CentOS 7, Linux
January 8, 2017 မှ စ ၍ Linux Foundation Course ကို စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် CentOS7ကို အခြေခံ ၍ သင်ကြားမည့် အတန်းဖြစ်ကာ အတန်းပြီးပါက Linux နှင့် ပတ်သက်သည်များကို အခြေခံများ ကောင်းမွန်စွာ သိရှိသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်အသစ်ဖြင့် ပထမဦးဆုံးဖွင့်သောအတန်းဖြစ်၍ Promotion နှုန်းထားဖြင့် သင်တန်းအစအဆုံး ကို ၄၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တက်ရောက်လိုသည့် သင်တန်းသားများကတော့ Laptop လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြား လိုအပ်သည်များကို ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းမှ ပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Chapter 1. Background & Introduction
Chapter 2. Linux Distributions & Installing
Chapter 3. Linux File System Hierachy
Chapter 4. Useful Linux Basic Commands
Chapter 5. Working With Directories & Listing Files
Chapter 6. Users & Groups
Chapter 7. File and Directory Permissions ( DAC )
Chapter 8. Deleting , Copying, Moving, Renaming Files
Chapter 9. Input, Output and Redirection
Chapter 10. Wildcards & Using Pipe
Chapter 11.Installing Software Packages
Chapter 12.Local and Remote Logins ( Basic )
Be the first to review “Linux Foundation Course” Cancel reply
Professional Video Editor Course